Na Côte d'Ivoire, ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ n'akụkụ ndị dọkịta - Afrikhepri Fondation
Na Côte d'Ivoire, ndị dibịa ọdịnala na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ n'akụkụ ndị dọkịta
Lọ Ivory Coast emeela ọtụtụ ihe iji kwalite ọgwụgwọ ọdịnala, nchọpụta pharmacopoeia na mmata nke ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala na usoro ahụike. Dị ka onye nduzi nke National Program for Promotion of Medicine (PNPMT) si kwuo, Kroa Ehoulé, ụdị 1421 nke ọgwụ ọgwụ na-etinye aka na ọgwụ ọdịnala na ikwe ka nlekọta nke ndị ọrịa achọpụtala ụbọchị ndị nchọpụta Ivorian. Onye nduzi na onye nhazi nke PNPMT na-akọwapụta na ọrụ a ga-abụ nke otu n'ime ndị nchọpụta kachasị ukwuu na West Africa, onye agbụrụ agbụrụ bụ Laurent Aké Assi, onye nwụrụ na Jenụwarị 14, 2014 mgbe ọ dị afọ 82. na Abidjan, na ụlọ nyocha ọdịnala ọdịnala, nke ọrụ ya nyeere anyị aka ịkọwapụta osisi ọgwụ ndị a.
Kroa Ehoulé na-akọwa na ọgwụ sitere na pharmacopoeia ọdịnala adịla nkwado site na ụlọ ọrụ nyocha na mba na mba ụwa.
“Anyị nwere ọgwụ ike ndị enyerelarịrị ma resị ha ahịa ọgwụ,” ka ọ na-akọwa hoo haa n'ajụjụ ọnụ a gbara ya SciDev.Net.
Site ugbu a gaa n'ihu, a na-enyocha ma na-achịkwa ọfịs nke ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala nke Ivorian site na mmemme ọ na-eduzi.
Dabere na Kroa Ehoulé, na Côte d'Ivoire, ndị dibịa ọdịnala na-eso ma na-agwọ nde mmadụ ise kwa afọ. “Ọgwụ ọdịnala adịghị asọ mpi na ọgwụ ndị ọzọ. Kama nke ahụ, ọ na-enye nlekọta ma na-arụkọ ọrụ na ọgwụ ọgbara ọhụrụ, ”ọ ga-achọ ịkọwapụta.
Mazị Kroa kọwakwara na a na-ejikarị ahịhịa agwọ ọrịa ịba, ọrịa na-efe efe nke ndị bu nje HIV / AIDS, ọrịa shuga, ọbara mgbali na ọrịa sickle cell.
Software iji mata ndị na-agwọ ọrịa
Tụkwasị na nke ahụ, PNPMT emepewo ma tinye usoro ngwanrọ maka ozi na njikwa nke ndị ọrụ ahụike ọdịnala (TPS), iji nye nzaghachi maka nsogbu ahụike nke ndị mmadụ.
Dabere na Benoît Banga N'Guessan, site na physiology, pharmacology na phytotherapy laabu nke Mahadum Abobo-Adjamé, otu n'ime ndị chepụtara TPS, sọftụwia ahụ mere ka enwee ike ịchọpụta ihe karịrị ndị ọrụ ahụike ọdịnala 8500 na mpaghara nchịkwa 12 nke na Ivory Coast.
"A nabatara TPS dị ka ihe atụ a ga-eji chọpụta ndị na-agwọ ọdịnala ọdịnala na mpaghara mpaghara West West Health Organisation (WAHO)," ka o kpughere.
Maka onye nyocha, ịhụ na usoro ọgwụgwọ ọdịnala kwesịrị ekwesị na mba a chọrọ ka e guzobe usoro iwu na iwu.
O kwuru, "Ọ ga-eburu n'uche ụkpụrụ nke ndị na-eme ihe nkiri ọdịnala ọdịnala, ụkpụrụ omume nke ọgwụ ọdịnala na usoro nke ọgwụ ọdịnala," ka o kwuru.
Slaha Clarisse Kayo, onye isi oche nke sayensị, nyocha, teknụzụ na gburugburu ebe obibi nke National Assembly nke Côte d'Ivoire, kwenyere na ngwanrọ nke usoro mmemme nke ọgwụ ọdịnala tinye maka nkewa nke ndị ọrụ a. na okike ulo ogwu ndi nlebara anya na ulo ogwu ndi mmadu ga enyere ndi ozo aka inweta ihe omuma di nkpa iji nyefee ndi mmadu aka.
Oriakụ Slaha Clarisse Kayo kwuru, sị: "Ọ bụrụ na a mata anyị nke ọma, anyị nwere ike ịkọwapụta echiche doro anya ma mee ka ndị ọrụ ibe anyị nabata iwu gbasara ịgwọ ọrịa ọdịnala na Côte d'Ivoire."
Ekwesiri ighota na kemgbe oge ufodu usoro ogwugwu di iche iche abanyela n'ime usoro ahuike ndi mmadu.
N'ihi ya, ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala na-arụ ọrụ ugbu a n'ụlọ ọgwụ, n'akụkụ ndị dọkịta na-agwọ ọrịa na ọnụ na-elekọta ndị ọrịa.
Emepere pavilọn nke mbụ otu ọnwa gara aga na Mahadum Universitylọ Ọgwụ Mahadum (CHU) na Treichville. Dabere na Minista Ahụike na ọgụ megide AIDS, mkpuchi na ụlọ ọrụ nlekọta ahụike nke oge a na Côte d'Ivoire na-eme atụmatụ na otu ụlọ ọrụ ahụike mbụ maka ndị bi na 12, otu ụlọ ọrụ ịmụ nwa maka ụmụ nwanyị 822 nke ịmụ nwa. ịmụmụ, akwa ụlọ ọgwụ maka ndị bi na 14 ọ bụla yana dọkịta maka ndị bi 000.